Allgedo.com » Pro Jawaari oo digniin xoogan udiray Ra’isul Wasaare Dr Saacid iyo Xukumada lafilayo
Home » News » Pro Jawaari oo digniin xoogan udiray Ra’isul Wasaare Dr Saacid iyo Xukumada lafilayo Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Gudoomiyaha barlamaanka dowlada Soomaaliya Pro Maxamed Sh Cismaan Jawaari ayaa shaaca ka qaaday in shaqadooda ugu badan ee afarta sano ee soo aadan ay noqon doonto la xisaabtanka xukumada.
Waraysi dheer oo uu bixiyay ayaa waxaa uu sheegay Dr Jawaari in ay xili kasta la socon doonaan shaqada golaha wasiirada, waxii qaldana ay qaban doonaan.
‘Shaqada barlamaanka ee afarta sano ee soo socota waa in ay ilaalisaa xukumada oo ay la socotaa waxa ay qabanayso’ayuu sheegay Gudoomiye Jawaari.
Dhanka kale waxaa uu sheegay in lag doonayo Ra’isul Wasaaraha inuu soo dhiso Xukumad kooban oo hadana tayo leh taas oo wax ka qaban karta Xaaladda Soomaaliya.
Dowlada cusub ayaa haysata mudo afar sano ah, waxaana laga sugayaa Dr Saacid inuu soo magacaabo Golihiisa Wasiirada.